Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် လှည့်မှို ထုတ်လုပ်သူနှင့် လှည့်မှို ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
TONG WEI ELECTRONIC., LTD. ၏ကျယ်ပြန့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် လှည့်မှို။ ထုတ်ကုန်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံ, အရွယ်အစားနှင့်ဒီဇိုင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောတဲ့ parameters တွေကိုအပေါ်ကြာရှည်ခံမှု, တက်ကြွသောအရောင်များကိုဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းများနှင့်မတူညီသော shape.We ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစိတ်ကြိုက်တူ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသော features တွေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ client များကသဘောကျသည်။
ပလတ်စတစ်ပုံသွန်းလောင်းခြင်းသည် ၁၈၀၀ နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်&တောင်ကြီးမြို့;ထိုအချိန်ကအသုံးများသောဆင်စွယ်ဘိလိယက်ဘောလုံးနှင့်ဆန့်ကျင်။ ပလတ်စတစ်ဘိလိယက်ဘောလုံးများလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်.
1868 ခုနှစ်တွင်,John W.Hyatt သည် celluloid ဟုခေါ်သည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်,သူကဘိလိယက်ဘောလုံးများတွင်ဆင်စွယ်အတွက်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်.လေးနှစ်အကြာတွင်,Hyatt နှင့်သူ၏အစ်ကိုသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်စက်ကိုတီထွင်။ မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်.
1946 ခုနှစ်တွင်,ဝက်အူဆေးထိုးစက်ကို James Hendry မှတီထွင်ခဲ့သည်,အရာ plunger ဆေးထိုး technique ကိုအစားထိုး.ဤသည်ကိုယနေ့အများဆုံးအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.injectionmolding.com.tw/my/rotational-molding.html
လှည့်မှို ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ လှည့်မှို ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ